Ny Sampana Fivondronana Laika dia rafitra ivondronan’ireo vahoakan’ Andriamanitra ao anatin’ny vondrom-paritany Laika ( VPL) eo anivon’ny Synodamparitany sy ny Vondrona Fototra Laika (VFL) eo anivon’ny Fitandremana .
Gazety fifandraisana :
1- gazety « Laika Miara-dia » ,mivoaka isan-droa volana , natao hifaneraserana sy hifampitaizan’ny VFL, VPL,SFL ary ny mpikambana Laika rehetra manerana ny nosy.
2- gazety boky « Rojo » , mivoaka indroa isan-taona , natao ho loharanom-bola maharitry ny SFL ary hifampizarana ny vaovao mahaliana sy fandalinana ary fanadihadiana samihafa, hanehoan’ny Sampana Laika ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ao aminy ka hifandraisany sy hifampitaizany amin’ny sehatra ao anatin’ny fiangonana sy ivelan’ny fiangonana.
Mitady mpandraharaha matihanina ny famokarana sy fanaparitahana ny gazety manomboka izao .Koa raha mahaliana anao izany tolotra asa izany dia manatona ny FOIBE FJKM, varavarana 502 , Analakely.
Toy izao ny asa andrasana amin’izany olona izany :
Famokarana ireo lahatsoratra sy sary.
Fanaovana ny PAO hatramin’ny “bon à tirer” (BAT).
Mitady ary mifampiraharaha amin’ny trano printy amin’ny fanontana.
Mandrafitra teti-pivarotana mazava tsara sy ahazoana manaparitaka ireo rehetra atonta. Manatanteraka ny asam-pivarotana.
Mitantana ny vola sy ny olona.
Mandrotsaka ny vola ao amin’ny kaonty SFLisaky ny roa volana.
Manao tatitra amin’ny biraon’ny SFL isaky ny roa volana farafahakeliny .